Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Caawa Oo Isniin Ah Qoreen Wargeysyada Yurub | Dhexnimo Media
Home Ciyaaro Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Caawa Oo Isniin...
Real Madrid ayaa dhameystirtay saxiixa xiddiga reer Brazil ee ay kooxaha Yurub ugu waa weyn doonayaan Rienier kaasoo ay 30 milyan euro uga soo iibsadeen kooxda reer Brazil ee Flamengo.
“Wax dalab ah marnaba uma aanan helin Kurzwa waa zero. Waxa uu ciyaaraa kulamo badan. Waa ciyaaryahan haatan saxiixay qandaraas cusub, laakiin waxba ma aanan maqlin. Arsenal marnaba nama soo wicin” ayuu yiri.
Barcelona iyo Juventus ayaa lala xiriiriyay inay is dhaafsanayaan Ivan Rakitic iyo Federico Bernardeschi, laakiin waxa ay u muuqataa in labada kooxood ay kawada hadlayaan inay isdhaafsadaan labo xiddig oo da’ yar ah.
Waxay taasi la micno tahay in xiddiga reer Chile aan lagu soo celin karin Old Trafford bishaan Jnaayo iyadoo kooxda ay raadineyso weeraryahan cusub ka dib dhaawacii soo gaaray Marcus Rashford.
Previous articleDjibouti oo laga hirgalinayo Xadhig Internet oo isku xidhaya wadamada Geeska Afrika
Next articleDEGDEG:- Ciidamo Cusub oo loogu talagalay in ay sugaan Amaanka Doorashada Somalia ayaa ka dagay Muqdisho.